(ရေဒီယိုသတ္တိကြွခြင်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ (2007) "3", Radiation Protection and Dosimetry: An Introduction to Health Physics. Springer Publishing. doi:10.1007/978-0-387-49983-3. ISBN 978-0387499826။
↑ (2013) "1.3", Radiation Oncology Primer and Review. Demos Medical Publishing. ISBN 978-1620700044။
↑ (2006) Modern Nuclear Chemistry. Wiley-Interscience, 57. ISBN 0-471-11532-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေဒီယိုသတ္တိကြွပြိုကွဲမှု&oldid=356960" မှ ရယူရန်
၁၈ မတ် ၂၀၁၇၊ ၀၂:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မတ် ၂၀၁၇၊ ၀၂:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။